क्रोयसिया संग हारे संगै अर्जेन्टिना नकआउट चरण पुग्न यस्तो चाहिन्छ अंकगणित ! || सुनौलो नेपाल
क्रोयसिया संग हारे संगै अर्जेन्टिना नकआउट चरण पुग्न यस्तो चाहिन्छ अंकगणित !
बिहीबार राति उपाधिको प्रमुख दाबेदार एवम् अघिल्लो संस्करणको उपविजेता अर्जेन्टिना क्रोएशियासँग अप्रत्यासित हार व्यहोर्न बाध्य भयो।
सम्भवतः करियरकै अन्तिम विश्वकप खेलिरहेका मेसीमा अधिकांश खेलप्रेमीको ध्यान अडिएको थियो। उनी पनि करियरको अन्त्यमा मुलुकलाई विश्वकप ट्रफी दिलाउन चाहन्थे। त्यसका लागि पहिलो खेलमा आइसल्याण्डसँग बराबरी खेलेको उनलाई जितको बिकल्प थिएन।
क्रोएशियालाई पराजित गरे अर्जेन्टिनाको अन्तिम १६ मा पुग्ने सम्भावना लगभग निश्चित थियो। तर, हिजोको पराजयले उसलाई विश्वकपको समूह चरणबाटै घर फर्काउने संघारमा पुर्‍याइदिएको छ।
यद्यपी, अर्जेन्टिनाका लागि विश्वकप अझै सकिएको छैन।उसलाई दोस्रो चरणसम्म पुर्‍याउन केही अंक गणितीय तथ्याङ्क बाँकी नै छन्।
समूह डीमा रहेको अर्जेन्टिनाको समूहबाट दुई खेलबाट सतप्रतिशत जित निकालेको क्रोएशिया नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।
समूहमा एक खेल खेलेको आइसल्याण्ड अर्जेन्टिनासँग बराबरी खेल्दै १ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। उसलाई पनि छनोट सम्भावना केही सहज छ।
यस्तै समूहको एक खेलबाट अंक जोड्न नसकेको नाइजेरियालका लागि पनि अन्तिम १६ मा पुग्ने सम्भावना जिवितै छ।
यता २ खेलबाट एकमा हार र एक बराबरीसहित १ अंक लिएर तेस्रो स्थानमा रहेको अर्जेन्टिनालाई नकआउट चरण प्रवेश गर्न अरूको तुलनामा कठीन छ।
कस्तो अवस्थामा अर्जेन्टिना नकआउट चरण पुग्छ हेरौ
आइसल्याण्डमाथि नाइजेरियाको जित या बराबरी
समूहको अन्तिममा रहेको नाइजेरियाले आज हुने खेलमा आइसल्याण्डलाई पराजित गर्नुपर्नेछ या बराबरी खेल्नुपर्नेछ।
यदि आजको खेलमा नाइजेरियासँग आइसल्याण्ड बराबरीमा रोकिएमा २ अंकसहित उ दोस्रो स्थानमा यथावत हुन्छ। पराजित भएमा उसँग १ अंक नै हुँदै तेस्रो स्थानमा धकेलिनेछ। यता आइसल्याण्डसँगको जितसँगै नाइजेरिया ३ अंकसहित दोस्रो स्थानमा उक्लनेछ र अर्जेन्टिना चौथोमा पुग्नेछ।
आइसल्याण्डमाथि क्रोएसियाको जित
शीर्ष स्थानमा रुहेको क्रोएशियाले समूह चरणको अन्तिम खेलमा पनि शतप्रतिशत जित निकाल्दै आइसल्याण्डलाई हराउनुपर्नेछ। यस्तोमा अन्तिम खेलमा अर्जेन्टिनाले नाइजेरियालाई पराजित गर्नु पर्नेछ। त्यसो भएमा अर्जेन्टिनाको ४ अंक हुनेछ र समूहको दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम १६ मा प्रवेश गर्नेछ।
आइसल्याण्डले नाइजेरियालाई हराए पनि अर्जेन्टिनाको सम्भावना बाँकी रहन्छ
शुक्रवार हुने आइसल्याण्ड र नाइजेरियाको खेलमा आइसल्याण्डले नाइजेरियालाई हराए पनि अर्जेन्टिनाको झिनो सम्भावना बाँकीनै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा आइसल्याण्डले अन्तिम खेलमा क्रोएशियासँग हार्नैपर्छ। त्यस्तो बेलामा अर्जेन्टिनाले नाइजेरियालाई कम्तिमा ४ गोल अन्तरमा हराउनुपर्छ। यस्तो हुँदा आइसल्याण्ड र अर्जेन्टिनाको समान ४–४ अंक भइ कम गोलअन्तरका आधारमा अर्जेन्टिना अन्तिम १६ मा पुग्नेछ।
यदि माथिका सम्भावनाहरू केही पनि नभए पूर्व उपविजेता अर्जेन्टिना समूह चरणबाटै घर फर्कनेछ।
समूहका अरू टिम कसरी पुग्छन् अन्तिम १६ मा
आइसल्याण्ड- आज नाइजेरियालाई हराएर अन्तिम खेलमा क्रोएसियासँग बराबर खेलेमा। अथवा आज नाइजेरियासँग बराबरी खेलेमा अन्तिम खेलमा क्रोएसयियालाई हराएमा।
नाइजेरिया- आज आइसल्याण्डलाई हराएमा र अन्तिम खेलमा अर्जेन्टिनालाई हराएमा।